Booliska Soomaaliya oo xusaya sanad-guuradii 74aad
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidanka Booliska Soomaaliya ayaa maanta oo Arbaco ah, 20-ka December u dabaal-degaya sanad-guurada 74aad ee aas-aaskiisa oo ahayd 1943.
Xuska munaasabadan ayaa waxay ka dhacaysaa qeybo badan oo kamid ah dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, iyadoo amaanka si weyn loo adkeeyay si looga hortago weeraro Al Shabaab inta lagu guda jiro dabaal-degga.
Ra'iisul Wasaare Khayre, wasiirro iyo mas'uuliyiin sare oo kamid ah dowladda Federaalka ayaa ka qeybgalaya xaflad ka dhacaysa xarunta Jeneraal Kaahiye oo lix maalmood kahor uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah oo 18 Boolis ah ay ku dhinteen.
Taliyaha KMG ah ee Booliska Jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax ayaa sheegay in ciidamada ay soo mareen marxalado kala duwan intii uu dalka kusoo jiray burburka, islamarkaana waxa uu ku booriyay ciidanka inay labo jibaaraan dedaalkooda lagu soo celinayo nabadda dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxaamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la filayaa inuu khudbad u jeediyay ciidamada taasi oo ku aadan munaasabada xuska 20-ka Maarso, isagoo la filayo inuu diirada ku saaro khudbadiisa arrimaha amaanka wadanka.
Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa kamid ah hay'adaha amniga ee saameeyay dagaalladii sokeeye ee dalka, balse hadda kasoo kabanaya burburkii soo gaaray, iyadoo dowlado iyo hay'ado shisheeye ka caawinayaan dib u dhiskooda iyo mushaaraadkooda.
Sidee u dhacday xuska maalinta Booliska Soomaaliya? [Sawirro]
Soomaliya 20.12.2017. 16:12
Ciidamada Booliska Soomaaliya ayaa maanta u dabaal degay sanad-guradii 74aad xilli ay jirto...
Rag hubeysan oo lagu toogtey duleedka Muqdisho [Fahfaahin]
Soomaliya 04.10.2018. 18:03
Dhalinyaro ka qeybqaadanaya dagaalka ka dhanka ah Al Shabaab
War Saxaafaded 25.11.2017. 20:43
Khayre oo ka hadlay qaraxii Muqdisho iyo Khasaaraha oo kordhay
Soomaliya 14.12.2017. 15:37
Qarax ka dhacay Xarunta Tababarka Booliska Soomaaliya
Soomaliya 14.12.2017. 09:36
Taliye Ciidan oo lagu dilay Muqdisho iyo Wararkii ugu dambeeyey
Soomaliya 20.03.2018. 22:58
Madaxweyne Farmaajo oo booqday Ciidamada dagaalka loo diyaariyay
War Saxaafaded 21.10.2017. 17:34
Keydkii ugu weynaa ee hubka Al-Shabaab oo la qabtey [DAAWO]
Soomaliya 07.04.2019. 11:12